Jamaica Tourism Workers Pension Scheme: Yekutanga Yerudzi rwayo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Jamaica Tourism Workers Pension Scheme: Yekutanga Yerudzi rwayo
(Tourism Workers Pension Scheme Signing) Mushandi wekushanya, Darnel Mason weVIP Attractions (agere) anokorokotedzwa nemakorokora kubva kuna Minister of Tourism Hon. Edmund Bartlett (kuruboshwe) uye Mutungamiriri weGuardian Life Eric Hosin. Mai Mason ndivo vakatanga kusaina kuchirongwa chekare cheTourism Workers Pension Scheme zvichitevera kuparurwa kwayo zviri pamutemo paMontego Bay Convention Center nhasi, Chitatu, Ndira 12, 2022. Vaona chiitiko ichi ndi(lr) Sachigaro weTWPS Board of Trustees, Mr. Ryan Parkes; Munyori Mukuru muBazi rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Jennifer Griffith naEVP & Chief Investment Officer kuSagicor Group Jamaica, VaSean Newman. Mufananidzo nerubatsiro rweJamaica Ministry of Tourism
Indasitiri yezvekushanya yeJamaica yakanyora nhoroondo yepasirese kutanga nhasi nekutanga kwakamirirwa kwenguva refu Tourism Workers Pension Scheme (TWPS), iyo ichabatsira mazana ezviuru zvevanhu, zvakananga uye zvisina kunanga, vakashanda muindasitiri iyi.
Vachitaura pakuparurwa zviri pamutemo nhasi kuMontego Bay Convention Center, Gurukota rezvekushanya, Hon. Edmund Bartlett, akati yaive yekutanga kuJamaica sezvo "hapana imwe nyika pasi rose ine hurongwa hwepenjeni yevashandi vekushanya." Nepo zvimwe zvirongwa zvakawanda zvepenjeni zvine chekuita nemakambani akasiyana kana masangano, Kushanya kweJamaica Workers Pension Scheme inombundira vashandi vese, vezvemabhizimisi, uye vane chekuita.
Iyo TWPS, yanga ichigadzirwa kwemakore gumi nemana, yakatangwa neGuardian Life seFund Administrators uye Sagicor Group Jamaica seFund Managers. Mari inodarika chidimbu chemadhora bhiriyoni imwe yembeu yakapihwa neHurumende yeJamaica yakatoendeswa kuchirongwa ichi.
Vachirondedzera zvine mufungo mavambo echirongwa chemudyandigere, Gurukota Bartlett vakayeuka kuti anodokusvika makore 15 apfuura pakudya kwemangwanani kwegore negore nevashandi paNorman Manley International Airport, pamavambo emwaka wevashanyi venguva yechando, “takaona mutakuri weRed Cap uyo akanga ane makore 78. chembere, ichiri kusunda trolley ine mitoro pairi. Ndikati, une nguva yakadii uchiita izvi? Akati 45 makore. Saka ndakati, sei uchiri kuita izvi mushure memakore makumi mana nemashanu? Iye akati, kana ndikasazviita pazera rino, handingakwanisi kutenga mushonga wangu; zvakatonyanya kuipa, ndingatadza kutenga chikafu changu.”
Minister Bartlett vakati vakanzwa kuti "chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka pamufananidzo uyu, sezvo pasina munhu anofanirwa kunge ari kushanda mune chero indasitiri, kunyangwe indasitiri yandiri kutungamira, uye anomanikidzwa pamakumi manomwe nesere kuti arambe achisundidzira mitoro inorema nekuti hapana nzira. ”
Vachitsigirwa neMunyori Mukuru weBazi rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Jennifer Griffith, chisungo chakaitwa.
“Tinofanira kuita chimwe chinhu pamusoro pazvo; tinofanira kugadzira hurongwa hwepenjeni."
Vatori vechikamu muchirongwa ichi vanodzivirirwa nemutemo wehurumende, neFinancial Services Commission inotarisira kutariswa uye hurongwa hwekutonga kuchengetedza kubva pakutyorwa uye hunhu husina kunaka. Zvakare, mushandi wekushanya anofanira kuverengerwa paTWPS Board of Trustees.
Minister Bartlett vakati homwe yepenjeni inogona kuita $1 trillion mumakore gumi. Akataura kuti, "iyi haisiriyo shanduko yemutambo asi idanho rakakura rehupfumi."
Akaenderera mberi achitsanangura kuti "homwe yepenjeni yakakura yezvingangoita izvi ichagadzira boka remari richachinja kugona kwevanhu vazhinji, masangano mazhinji kuti akwanise kugadzira hupfumi."
Vachitambirawo nekurumbidza homwe iyi semushanduri wemutambo vaive Mutungamiriri weJamaica Hotel and Tourist Association, VaClifton Reader; Mutungamiri weGuardian Life, VaEric Hosin; EVP & Chief Investment Officer kuSagicor Group, VaSean Newman; uye Sachigaro weTWPS Board of Trustees, VaRyan Parkes.